Dokam-barotra ao amin’ny sokajy personals amin’ny USA any Paris, dia avy ny vehivavy
Mahafatifaty ny vehivavy mainty volo, slim, tsy misy fahazaran-dratsy, falifaly, tsara toetra amam-panahy dia hihaona amin’ny mendrika ny olona — ny Muscovite, tsy nisy firaketana heloka, ny fianakaviana sy ny trano fonenana olana.
Zazavavy mitady lehilahy ho an’ny fanambadiana te lehilahy malemy fanahy, be fiahiana ny tantaram-pitiavana aho dimy amby roa-polo taona, nefa tsy manimba ny fahazarana Muscovite. taona. Mahaliana, manifinify, mahaleotena, amin’ny vazivazy sy ny isan-karazany ny zavatra mahaliana. Nisara-panambadiana tsy misy ankizy.
Mipetraka any Israely
Amin’ny fomba iray na hafa manana ireo toetra mba hitady olona. Jereo ny mpiara-miasa ho an’ny lehibe sy ny fifandraisana. taona. Rehetra fahatsarana sy fahasambarana.
Rita dimam-polo taona. Dia hihaona irery no tsy adaladala, tsara fanahy, malefaka, saro-po, tia vazivazy ny olona noho ny fifandraisana maharitra. Ho mendrika fifandraisana maharitra ny fivoriana, ny fifandraisana, ny mpiray asa faran’ny herinandro sy ny fialan-tsasatra, sy angamba ho an’ny fanaovana tokantrano maso, ary mety ho eo amin’ny taniny, ny fitiavana fitiavana ny saina sy ny fahazavan-tsaina samy hafa. taona. Faly mihaona ny manan-tsaina, ny fanatanjahan-tena, amim-pifaliana ny olona.
Tonga soa eto amin’ny fomba fiaina ara-pahasalamana. Mba miangavy re antsoy aho nandritra ny herinandro. Ny faran’ny herinandro amin’ny fotoana rehetra ho anao.
Ny anarako dia Inna, aho dimy amby roapolo taona, fanabeazana, asa. Tsy mivadika, tsara fanahy. Hivory hiaraka mendrika, azo antoka ny olona ho an’ny lehibe sy ny fifandraisana. taona. Dia hihaona azo antoka sy manan-tsaina ny olona ny Eoropeana tarehy ho an’ny mpiray fialan-tsasatra. Tonga soa tsy misy fahazaran-dratsy. taona. Manan-tsaina vehivavy, mahafinaritra ny tarehiny, slim, tsara, malaza, manan-tsaina sy mendrika, mavitrika sy velona, nefa tsy manimba ny fahazarana. Te-hihaona amin’ny lehilahy dimam-polo taona, afa-tsy ny rosiana, tsy misotro, afaka ny fitiavana, ny ho tia.
Aho ho lehibe olom-pantatra sy ny tena fivoriana nahita Fianarana, manintona mahaliana ny vehivavy dia hihaona mahafinaritra nahita fianarana monina ao Paris, mahaliana eo amin’ny fifandraisana ny olona efa-polo taona. Manintona, manifinify Muscovite te hihaona irery, tsara fanahy, olona mendrika ny efa-polo taona maro ho an’ny fifandraisana matotra. Manambady mba tsy hanelingelina. Dia hahafantatra ho an’ny lehibe sy ny fifandraisana, angamba ho an’ny fanambadiana sy fanaovana tokantrano maso ny aina ny tontolo iainana amin’ny malala-tanana sy ho tsara fanahy rangahy mihoatra ny dimam-polo, be fitiavana.
Mahafinaritra, maimaim-poana sy ny ara-boajanahary. Hihaona amin ny maimaim-poana, mendrika sy tompon’andraikitra ny olona, tsara tarehy, latsaky ny efa-polo taona, avy any new York.
Ihany no liana amin’ny fifandraisana matotra, amin’ny fanantenana ny mamorona ny fianakaviana iray. Momba ahy: slim, ny tovovavy tsara tarehy, noho ny telo-polo taona. Mahafatifaty manifinify Muscovite fitomboana, ny fanabeazana, raha tsy misy ny trano fonenana, sy ny olana ara-bola dia hihaona amin’ny tanora lehilahy iray maimaim-poana avy amin’ny taona maro ho an’ny fifandraisana matotra. taona
← Soso-kevitra toerana ho an'ny Dating free
Toerana ho Fiarahana ara-Nofo - Fantatrao, sy Mihaona maro Thrombotic →